सामाजिक संजालका भाईरल ‘सेरे’को हो र कसरी बने सेरे? वास्ताविकता यस्तो छ – Bisal Chautari
सामाजिक संजालका भाईरल ‘सेरे’को हो र कसरी बने सेरे? वास्ताविकता यस्तो छ
- २८ माघ २०७४, आईतवार ११:५९ मा प्रकाशित
These are the ‘Sere’ of the brother’s social network
काठमाडौँ, २०७४ माघ २८ आइतबार । सामाजिक संजालमा जोक्स तथा चुड्किलाहरुमा हेर्दै आफुलाई हाँसो आउने एक व्याक्ति हासीरहेको तस्विर देख्छौं । सामाजिक संजालहरुमा सेरेको नामले चिरपरिचित यो व्याक्तिको तस्विर वास्तवमा एक चर्चित चिनियाँ बास्केटबल खेलाडी याओ मिङको हो ।
मिङले १८ वर्षको उमेरबाट सन् २००२ देखि बास्केटबल खेल्न सुरु गरेका थिए । २००९ मे तिर एक प्रतियोगिता खेल सम्पन्न भैसकेपछि मिङ हास्ने क्रममा एक फोटोग्राफरले मिङको यस्तो हँसाईलाई क्यामेरामा कैद गरेका थिए ।
उक्त तस्वीरलाई एक चित्रकारले सेतो स्केचमा उतारे र व्यंग्य गर्ने हेतुले सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेपछि यो तस्विर एकाएक भाईरल भएको हो । हेर्दै साँच्चै नै हाँसो लाग्ने मिङको यो भाईरल तस्विर फेसबुकमा जोक्स पेजहरुको पोस्टमा बढी मात्रामा देख्न सकिन्छ ।